COP26: Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya chọrọ ịbụ akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe dị ize ndụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Sustainability News » COP26: Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya chọrọ ịbụ akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe dị ize ndụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Sustainability News • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Mkparịta ụka panel na njem nlegharị anya dịka ihe ngwọta maka mgbanwe ihu igwe
Otu ndị mmeri na mgbanwe ihu igwe hibere taa: Saudi Arabia, Kenya, Jamaica sonyere ndị agha ma kpọọ ndị ọzọ na COP26, UN Climate Change Conference.
Njem nlegharị anya nọ na ebumnuche taa na UN nke iri abụọ na isii Climate Change Conference (COP26) na Glasgow, UK
Ime njem site na World Travel Market London gaa Glasgow isonye na COP26 bụ Hon. Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya maka Jamaica, Edmund Bartlett, onye odeakwụkwọ ukwu nke njem nlegharị anya nke Kenya Najib Balala, na onye isi ala, Minista njem nlegharị anya maka Saudi Arabia Ahmed Aqeel AlKhateeb.
Onye Minista Saudi setịpụrụ ụda maka njem nlegharị anya iji sonyere ndị agha na mgbanwe ihu igwe n'okwu ya.
Ndị isi njem nlegharị anya atọ a sitere na Kenya, Jamaica na Saudi Arabia taa debere ụda maka njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na COP26 na Glasgow.
Ịbanye ndị agha ime njem nlegharị anya akụkụ nke Ngwọta bụ mkparịta ụka nke onye bụbu onye isi ala Mexico Felipe Calderon duziri.
Ọzọkwa na panel bụ Rogier van den Berg, Global Director, World Resources Institute; Rose Mwebara, Onye isi na onye isi nke Climate Technology Center & Network, UNEP; Virginia Messina, SVP Advocacy, World Travel & Tourism Council (WTTC); Jeremy Oppenheim, Onye guzobere & Onye Mmekọ Senior, Sistemu, Nicolas Svenningen, Onye njikwa maka mmemme ihu igwe zuru ụwa ọnụ, UNFCCC
HE Ahmed Aqeel AlKhateb kwuru n'okwu ya:
Ndị ọbịa nke ọma, ụmụnwaanyị na ndị ama ama.
Daalụ maka isonyere anyị ebe a taa iji kwado Sustainable Tourism Global Center.
Mgbanwe ihu igwe bụ ihe na-akpa ike na-eche mmadụ ihu, ya mere anyị ji nọrọ ebe a na Glasgow.
Mgbe afọ abụọ siri ike maka njem na njem nlegharị anya, njem na-alọghachi.
Ma ọ bụ ezie na nke a bụ ozi ọma maka azụmahịa njem nlegharị anya n'ebe niile, anyị kwesịrị ijide n'aka na uto n'ọdịnihu dabara na mbara ala anyị.
Nnyocha nke Nature bipụtara na 2018 chọpụtara na njem nlegharị anya na-enye aka 8% nke ikuku ikuku griin haus zuru ụwa ọnụ.
Akụkọ IPCC nke 2021 doro anya nke ọma.
Anyị niile kwesịrị ime ngwa ngwa na ihe siri ike, ugbu a, iji gbochie mmetụta nke mgbanwe ihu igwe.
Ya mere, gịnị ka a pụrụ ime?
Agreement Paris na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ịchọta ngwọta maka mgbanwe ihu igwe na-adabere na mkpa maka ọganihu akụ na ụba na mmepe mmekọrịta ọha na eze.
Obi abụọ adịghị ya na njem nlegharị anya bụ ụlọ ọrụ dị mkpa maka akụ na ụba ụwa.
Ihe karịrị nde mmadụ 330 na-adabere na ya maka ibi ndụ ha.
Tupu ọrịa a na-efe efe, otu n'ime ọrụ anọ ọ bụla e mepụtara n'ebe ọ bụla n'ụwa nọ na njem nlegharị anya.
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya, ọ na-aga n'ekwughị okwu, chọrọ ịbụ akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe dị ize ndụ.
Ma, ruo ugbu a, ịbụ akụkụ nke ngwọta dị mfe ikwu karịa ime.
Nke ahụ bụ n'ihi na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya kewapụrụ nke ukwuu, gbagwojuru anya ma dịkwa iche iche.
Ọ na-agafe ọtụtụ ngalaba ndị ọzọ.
Ihe karịrị azụmahịa njem nlegharị anya nde 40 - ma ọ bụ pasenti 80 nke ụlọ ọrụ niile - dị obere ma ọ bụ ọkara.
Ha bụ ndị ọrụ njem, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma ọ bụ obere ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ha enweghị okomoko nke ngalaba nkwado raara onwe ya nye
ma ọ bụ mmefu ego maka nyocha na mmepe metụtara ya.
Ọ dị obere ka ha nwere ohere ịnweta otu ndị na-ahụ maka njikwa na-akwụ ụgwọ nke ukwuu bụ ndị nwere ike nye ha ndụmọdụ maka ụzọ ha ga-esi gbutu ụkwụ carbon ha ka ha na-ejigide akara ala ha.
N'ihi ya, ruo taa, ụlọ ọrụ ahụ nwere - n'agbanyeghị ezi ebumnuche - enwebeghị ike ịrụ ọrụ zuru oke n'inyere aka dozie ihe ịma aka nke mgbanwe ihu igwe.
Ugbu a, n'ikpeazụ, nke ahụ nwere ike ịgbanwe.
Onye isi ala Saudi Arabia, HRH Mohammed bin Salman ekwupụtala ihe okike n'ime alaeze nke Sustainable Tourism Global Center.
Ụlọ ọrụ ahụ ga-achịkọta otu mba dị iche iche, ndị na-emekọ ihe ọnụ.
Ọ ga-enye ntụzịaka na nka kacha mma na ngalaba ahụ, ka anyị wee gbanwee ụzọ mkpokọta anyị iji kwado nkwado.
STGC na-atọ ụtọ n'ihi na ọ ga-eme dị ka ebe nzukọ maka ndị si na njem nlegharị anya, gọọmentị, agụmakwụkwọ na òtù mba ụwa.
Ebe anyị ga-enwe ike ịmụta n'aka ndị kacha mma maka nkwado na ịkesa ihe ọmụma metụtara ya na omume kacha mma, iji mee ka mgbanwe mgbanwe anyị na-aga n'ihu gaa na net-efu n'ọdịnihu.
Na site n'ime nke a chebe ọdịdị na nkwado obodo.
N'ụzọ dị oke egwu, ọ ga-enyere anyị aka ime mgbanwe ndị a ma n'otu oge ahụ na-enye ọrụ na ịkwọ ụgbọala site n'ịkwalite ihe ọhụrụ na site na ịnye ihe ọmụma, ngwá ọrụ, na usoro ego.
M na-atụ anya ka m kparịta ụka na Center na panel a a na-akwanyere ùgwù, na-enyocha otú STGC ga-esi nyere ụlọ ọrụ njem nlegharị anya aka mgbanwe na ikuku efu, ma mee ihe iji chebe ọdịdị na nkwado obodo.